Ny iPad vaovao dia miaraka amina charger mahery vaika | Vaovao IPhone
Hatramin'izao, ny maodely iPad rehetra dia niaraka tamin'ny charger 10W izay nahavita nameno ny batterin'ilay fitaovana tao anatin'ny fotoana fohy.
Tamin'ny fahatongavan'ny iPad fahatelo, Apple dia tsy maintsy nampiditra bateria mahazaka ambony ary izany dia nampitombo be ny fotoana ilaina hamita ny tsingerin'ny fiampangana. Afaka nanamarina ihany koa izahay fa amin'ny fampiharana izay mitaky be dia be, ny charger 10W dia tsy afaka mamatsy angovo ilaina mba hisorohana ny bateria tsy hitohy hamoaka tsikelikely.
Miaraka amin'ny charger 12W vaovao dia manandrana i Apple mampihena be ny fotoana fandefasana amin'ny fitaovanao rehetra. Ity fitaovana ity dia hivoatra miaraka amin'ny iPad taranaka fahefatra na dia azo vidiana tsirairay ao amin'ny Apple Store Online amin'ny vidiny 19 euro aza.
Na eo aza ny heriny, ity charger ity dia mifanaraka amin'ny vokatra marobe, ao anatin'izany ny maodely iPod sy iPhone samihafa.
Fanazavana fanampiny - Tsy handoa vola ny iPad vaovao raha miasa mafy izy io
Rohy - Apple 12W USB Charger
Loharano - Applesfera
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny iPad vaovao dia miaraka amina charger mahery vaika kokoa
Mayin dia hoy izy:
Salama ahoana ny zavatra? Misy aminareo ve manana ny antony mahatonga ny ipad taranaka fahatelo hanjavona ao amin'ny fivarotana paoma?
Valiny tamin'i Mayin
Hihomehy ny mpanjifanao.
Jose bolado dia hoy izy:
Mayin .. Satria namoaka ny iPad faha-4 izy ireo ary tsy hivarotra intsony ny taranaka faha-3 .. Mahamenatra! Satria 6 volana lasa izay dia nivoaka ny iPad Vaovao ary namoaka ny taranaka faha-4 fotsiny izy ireo .. Tokony ho hitan'izy ireo ny iPad faha-4 nalaina tamin'ny taona ho avy ary ho an'ny iPad 2 mankany amin'ny iPad vaovao dia tsy fantatro ny antony nanaovan'izy ireo izany hadalana izany ary etsy ambony tsy misy manova ny hafainganana fotsiny .. Raha tokony haka endrika hafa manify sy tsy dia milanja .. Toy ny nataon'izy ireo tamin'ny iPad mini .. Mahamenatra! Ato anatin'ny 6 volana ny iPad Vaovao dia toy ny hoe efa lany andro ary eo amboniny dia ho very lanja.
Valiny tamin'i José bolado
Mahagaga !!!! Avy amin'ny vdd fa fivarotana paoma no vdd? Raha tsikaritrareo, na ny add 4 aza dia kely noho ny add 3 novidianay, Q DISAPPOINTMENT!
Crisrope dia hoy izy:
Mampiseho izany fa Apple dia afaka mamokatra vokatra matanjaka kokoa noho izy manome nefa aleony mametra mba hananana zavatra atolotra amin'ny taranaka ho avy ary milaza fa vaovao izy io. Eo anelanelany sy ny fetran'ny rindrambaiko dia mila fanavaozana
Mamaly an'i Crisrope
Manery ny hanavao ve izy ireo? raha ny ipad mini dia mbola ipad2 ary ny ipad2 dia mbola amidy, dia miaro ny fitoriana ratsy araka ny lazain'izy ireo amin'ny taniko. Mirary ny soa indrindra
Kitiho hamaha: pikazo hamaha (Cydia)
Afeno ny apps amin'ny iPad tsy misy jailbreak